Ekuqaleni umuntu yalungiswa i-career brilliant in the izakhiwo isimo. Uyise ngaba nesikhundla esiphakeme e-Ministry of Foreign Affairs, futhi ukulungele ngempela ukuze uqhubeke umsebenzi umzali yayo. Kodwa isiphetho decreed ngenye indlela, futhi Billionaire manje eyaziwa Sergey Sarkisov ngakwazi ukwenza capital omkhulu wezimali ngenxa entshisekweni ibhizinisi umshwalense. Kule minyaka engu-eziningana, lo somabhizinisi ophethe omunye isikhundla okuholela ohlwini wabantu abacebe waseRussia. Wakwazi kanjani ukufinyelela ezindaweni eziphakemeyo isiyezi umsebenzi wakhe futhi abe uchwepheshe ohlonishwayo emkhakheni ibhizinisi umshwalense? Cabanga ngalo mbuzo kabanzi.
Yini ngokuyinhloko kungaba nesithakazelo kubantu uma kuziwa empilweni umuntu odumile, njengoba Sergey Sarkisov? Biography, izingane, umsebenzi, isimo somshado, ukwenza izinto zokuchitha isizungu, ngokwemvelo.
Businessman wazalwa Meyi 18, 1959 ku-dolobha, emkhayeni wabantu esiphakeme eyayisebenza ngaphansi kakhulu Anastasa Ivanovicha Mikoyana. Sergei has a nomfowethu omncane UNicholas. Kakade ngesikhathi abasebasha yobudala ingane ngafunda nokubaluleka wangempela imali, lapho ngineminyaka engu-eyishumi nesithupha waya ethula sayiswa esiteshini sesitimela.
Emva kokuthola kamatikuletsheni, Sergey Sarkisov ngempumelelo kudlule izivivinyo at MGIMO, ngokulandela isibonelo endleleni kayise of ubudlelwano zomnotho. Nokho, ngenkathi usengumfundi, waqala ukubheka imisebenzi. Ukuze uthole sikhathi wayesekhonza wahlanganyela design, ukudala ukukhangisa izakhiwo kuyo yonke inhlangano wedolobha fur Atelier. Khona-ke yena wayesebenza ku izinguqulo lobuchwepheshe. Ngesikhathi undergraduate Sergey Sarkisov wathatha ijamo eKomidini Youth Izinhlangano leKomiti Central Yentsha League e-Latin emkhakheni American, okuyinto eye yaba ngaphansi kokulawula uMnyango ngamazwe leKomiti Central we CPSU.
Ukuba umnikazi we-diploma athandwayo ekuqaleni '80s, Sergey Sarkisov, ogama biography iqukethe amaqiniso amaningi ezithakazelisayo futhi emangalisayo, ngahamba ngayosebenza hhayi umsebenzi. Wathatha inkampani "Ingosstrakh" umsebenzi ojwayelekile. Futhi njengoba kwasho insizwa, by wavuma siqu, wayengazi lutho mayelana butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ibhizinisi umshwalense, kwakufanele bonyana enze zidlule zonke izinyathelo umsebenzi.
Kwaphela iminyaka eminingana, uye yazuza okuhlangenwe nakho emsebenzini, wakwazi laba yinhloko yomnyango wezomthetho "Ingosstrakh" ngisho esikhathini kusuka 1987 kuya ku-1990 walibangisa ehhovisi ummeleli wenkampani eLatin America.
Ekuqaleni kwawo-90 sika-Sergey Sarkisov, ogama isithombe manje ngokuvamile atholakala cindezela ibhizinisi, unquma ukuya ukubhukuda khulula. Ushiya "Ingosstrakh" bese kuba oshayelayo yomshuwalense uNowa isakhiwo "RESO-Isiqinisekiso". I Billionaire esizayo waqala ukufuna izindlela ezintsha umsebenzi, kodwa abaphumelelanga njalo. Ngokwesibonelo, usomabhizinisi usuqalise iphrojekthi ohlinzekela ukuqaliswa nomshuwalense ngokusebenzisa izikhungo yasebhange. Kodwa akazange awaqondise noma. Umzamo Futhi, ezinye zehlulekile Frish ukuheha izimali ibhizinisi umshwalense. Noma kunjalo, bekatsatsa esiphezulu izikhundla kule nkampani, uye wakwazi ujike drilldown "RESO-Isiqinisekiso" e umdlali omkhulu futhi kuphumelele emakethe umshwalense.
Phakathi nenhlekelele ngo-1998 wakwazi ukulondoloza ibhizinisi ngokuletha ndawonye imali drilldown "RESO-Isiqinisekiso" nomnikazi inhlokodolobha, "MDM Bank" Aleksandrom Mamutom.
Okwamanje, le nkampani esichumayo Sarkisov, kanye Frish akuyona abahileleke ngokuqondile ukuphathwa, ngaphandle ezimweni lapho angenelele endabeni ngempela.
Ngo-2014, lo somabhizinisi waklonyeliswa isimo zokuhlonipha owaphuma we bezimali Zonke-Russian Prize "idumela" ku ukuqokwa "Ukuze umnikelo siqu ekuthuthukiseni imboni yomshuwalense ku Russian Federation."
Njengoba kakade wagcizelela, Sergey Sarkisov - omunye abacebe kunabo bonke e-Russia. Akazange nje ingumnikazi izinkampani zomshuwalense, amabhange, izinkampani Leasing, kodwa futhi izikhungo avtodillerskimi, kanye sempesheni non-state. Futhi bonke abasebenza ngaphansi brand olulodwa - "RESO". Ngaphezu kwalokho, lo somabhizinisi ungumnikazi inethiwekhi nezikhungo zezokwelapha, kanye kwenkululeko ebhizinisini lakhe zihlanganisa imisebenzi eminingana emikhulu yentuthuko.
Sergey Sarkisov (Billionaire) iyasebenza emkhakheni ezombusazwe enkulu. Ngisho phakathi kuka-zero, wagijima ngoba umkhandlu-dolobha inhloko-dolobha nomhlangano wesine, kanye nokusekelwa labavoti of Social Democratic Party of Russia.
Kodwa ikhomishana eMoscow yokhetho uye waqaphela angaphezu kuka-26% abavoti 'amasignisha emthethweni, kanye nosomabhizinisi ayizange iphumelele inqubo yokubhalisa. Okwamanje, usaqhuba ngokugwema ukuhileleka kwezombusazwe, sivikele ilungelo kobukhosi Karabakh sika.
Bambalwa bayazi ukuthi Frish wazama isandla sakhe isethi njengoba kumdlali. Ngo-Cannes, wambeka phambi kwabo ifilimu ngempilo ukuthi kukhona abantu abacebile. Ibizwa ngokuthi "ingaziki." Sarkisov ayekubhalile befilimu nenomakhanya kulo indima isihloko. Businessman uhlela ukwakha lwencwadi. Billionaire wabhalisa ngisho abalobi esikoleni eMoscow. Kwayanelisa ukushiya esikhiqiza amafilimu lendodana yakhe uNicholas, futhi ulindele ukuthi esikhathini esizayo kuyoba movie yohwebo zabo ngokuphelele.
Sarkisov kuyinto umsunguli we eziningana izincwadi zebhizinisi, phakathi okuyinto atiwa atholwe "umshwalense Siqu", "Management", "Umshwalense." Ngaphezu kwalokho, uye ebhaliwe ezingaphezu kwamashumi amahlanu zincwadi ziphakathi kokulandisa okuvelele yesayensi ezindabeni sokuphepha nokulawula.
Kuyaziwa ukuthi Sergey Eduardovich Sarkisov washada. Inguyise ezinganeni ezinhlanu. Omunye wamadodana ka-usomabhizinisi - Nikolai ngempumelelo kususa "cinema entsha Russian", ngemuva kwekufundza tikhatsi letinyenti ngesikhathi ehlonishwa Hollywood School e-Los Angeles. Usomabhizinisi futhi inama izingane ayiwele naye, ngubani akunjalo kudala yabonakala ukukhanya.
Iphanorama kuhlanganisa lokuqoqa izinto zokuzilibazisa usomabhizinisi izibalo obhejane. He is ngamakhala isiFulentshi, isiNgisi neSpanishi.
Ake sixoxe izindleko ifomula izindleko nalokho isetshenziswa basuke
Serebryany eBor, yokudlela "Manor" - iholide imilingo imfihlo
The best gangster ifilimu. "The Godfather": nabalingisi, impumelelo
Izimbungulu futhi kanjani ukulwa nabo ekhaya
Lapho bakha i-chess nokuthi babheka kanjani
Ukudla kahle - Mission ezingenzeka
Ingabe kunzima ukubaluleka cadastral komhlaba kanye izakhiwo